ragoborn@gmail.com, Author at Injiilka oo ku qoran af-soomaali - Page 4 of 29
Aquarius waa xubinta lixaad ee Burjika waana qayb ka mid ah Unugga Zodiac-ka oo muujinaya natiijooyinka guusha Midka imanaya. Waxay ka samaysan tahay sawirka nin… Read More »Aquarius ee Zodiac qadiimiga ah
Kansarku wuxuu caadi ahaan u muujiyaa carsaanyo wuxuuna ka yimid ereyga Laatiinka ee loogu talagalay dib u habeyn. Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa… Read More »Ansarka Zodiac qadiimiga ah
Gemini waa Laatiinka mataano. Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa May 22 iyo June 21 waxaad tahay Gemini. Gemini waxay samaysaa laba qof, badanaa… Read More »Gemini ee Zodiac qadiimiga